Hurdo la’aanta waa dhibaato weyn. CBD Ma Xal baa? • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn CBD Hurdo la’aanta waa mushkilad weyn. Xalka CBD ma yahay?
albaabka Ties Inc. 29 Oktoobar 2019
maqaal by Ties Inc. 29 Oktoobar 2019
Waxaa jira dad badan oo saacado aad u yar seexdaa maalin kasta. Taasina xitaa kama hadlin dadka qaba dhibaatooyinka hurdada ama cilladaha kuwaas oo mararka qaarkood hurda saacado ku filan, laakiin aan helin nasasho ku filan sababtoo ah ma galaan hurdo qoto dheer. Sida ay noqon karto xaaladda hurdada hurdada, stress-ka iyo xanuunka welwelka, tusaale ahaan. Sidee hurdo la'aantu u saamaysaa dadka iyo sidee CBD u caawin kartaa?
1 Jaranjarooyinka saqafka leh
2 Qalabka hurdada
3 Joogtada ah iyo CBD
Kaliya fiirso taxanaha Netflix, ka shaqee ilaa goor dambe, waqti dheer ku qaad taleefankaaga gacanta ama culeyska shaqada. Dhamaan waxyaabaha kaa hor istaagi kara inaad hurdo kugu filan hesho. 'Hurdo la'aanta shaqaalaha waxay ku kacdaa shirkadaha Dutch-ka 12,4 bilyan oo euro sanadkii,' ayaa cinwaan looga dhigay AD dhamaadka usbuucii la soo dhaafay. Dhaawacan dhaqaale 'wali wuu jiraa, maxaa yeelay dhibaatooyinka hurdada waxay u horseedi karaan dhibaatooyin caafimaad oo daran iyo niyad jab.
Jaranjarooyinka saqafka leh
Wouterson waa tababare hurdo oo muddo 16 sano ah baaritaan ku hayay hurdo yaraanta. Wuxuu ku soo gabagabeeyey in dad badani seexdaan wax aad u yar. Dadka waaweyn ee ka weyn da'da 24 waxay u baahan yihiin inta u dhaxeysa toddobo ilaa sagaal saacadood oo hurdo ah. Si kastaba ha noqotee, boqolkiiba 24 dadka shaqeeya waxay seexdaan inta udhaxeysa lix ilaa todobo saacadood iyo boqolkiiba sagaal kale ayaa hurda xitaa wax kayar, sida ku xusan AD. Tirooyinka naxdinta leh oo aan ahayn wax lala yaabo in qaar badan oo 'hurdo gaagaaban' ahi si fiican u shaqeyn waayaan. Hurdadu waxay muhiim u tahay ka shaqaynta iyo soo kabashada jidhka iyo maskaxda. Haddii hurdo la'aantani ay waqti dheer qaadato, tani waxay yeelan kartaa cawaaqib xumo, maxaa yeelay dadku si fiican ugama soo kabtaan waqti iyo waqtiba.
Si ay u helaan hurdo fiican habeenkii, dad badan ayaa u jeesta kaniiniyada hurdada. Magnesium iyo fitamiin C iyo cunto caafimaad leh ayaa kaa caawin kara inaad hesho hurdo fiican habeenkii, ayuu yidhi Wouterson. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo jira kooxo fara badan oo gaadha kaniiniyada hurdada oo ay ku jiraan walaxda melatonin. Si kastaba ha ahaatee, tani ma caawinayso qof walba, sidoo kale, dadku waxay si dhakhso ah ugu tiirsanaan karaan kaniiniyadan. Melatonin waa walax uu soo saaro jidhku. Isla marka uu jidhku ogaado in walaxda si joogto ah loo buuxinayo isticmaalka kaniiniyada hurdada, wax soo saarkeeda melatonin ayaa hoos u dhacaya. Intaa ka dib waxaa jira dad hurdo xun u hurda oo maalintii u jeesta daroogada iyo waxyaabaha kiciya. Maaha wax aan caadi ahayn in maamulayaasha iyo madaxda sare ee jagooyinka sare ay u adeegsadaan daroogooyinka sida kookeynta si ay 'caadiyan' ugu shaqeeyaan oo ay ula qabsadaan cadaadiska shaqada ee weyn.
Joogtada ah iyo CBD
Waxa ugu muhiimsan ee hurdada wanaagsan habeenkii waa joogtaynta. Sariirta aado waqti isku mid ah maalin kasta oo kac wakhti go'an. Laxanka ayaa sameeya yaabab. Hubso inaad had iyo jeer heli karto 8 saacadood oo hurdo ah. Ma waxaad tahay qof hurdo xun oo dabiici ah? Kadibna cannabinoid (CBD), oo ah qayb ka mid ah xashiishadda, ayaa soo bandhigi kara xalka. In kasta oo la'aanta cilmi-baaris cilmiyeed, haddana waxaa jira caddaymo badan oo sheeko-dhac ah. Daroogadu ma aha oo keliya buunbuunin, laakiin dad badan ayaa waayo-aragnimo togan ku leh CBD oo ah gargaar hurdo dabiici ah. Dhowr dhibcood oo saliidda CBD ah ayaa ku filnaan kara nasashada oo la kulmi kara culeys yar, xanuun ama walaac. Kuwani dhammaantood waa arrimo saameyn ku yeelan kara hurdo xumo habeenkii. Nasashada sariirta badanaa waxay micnaheedu tahay inaad si fiican u seexato oo aad nasato adigoo nasanaya. Marka fiiro gaar ah u yeelo, malaha adduun baa kuu furmaya.
Malawi waxay ka codsatay feedhyahankii hore Mike Tyson inuu...
Aasaaska Siyaasadda Dawooyinka: saxiix codsiga sharciyeynta...